Guddiga Olombikada Soomaaliya oo ka qeyb galey Shirweynihii haweenka Sportiga
Madax ka tirsan guddiga Olombikada Soomaaliya ayaa ka qeybgashey shir weynihii Sportiga Haweenka Caalamka ee 2013,kaasi oo ka dhacay dalka Kuwait isla markaana looga hadlay arimaha horumarinta Ciyaaraha caalamka gaar ahaan dhinaca Haweenka.
Shirweynahan oo uu martigeliyey dalka Kuwait ayaa waxaa lagu casuumey SOC iyadoo ay u meteleysay Faaduma Cali Nuur oo ah xubin guddiga fulinta GOS, ahna madaxa Zone-ka 1aad (Puntland) iyadoo halkaasi sidoo kale ay goob joog ka ahaayeen dhamaan wakiilada dalalka qaarada Africa iyo Aasiya.
Faadumo Cali Nuur ayaa halkaasi ka jeedisey warbixin balaaran oo ay si weyn usoo dhoweeyeen dhamaan ka qeybgalayaashii,iyadoo sharaxaad guud ka bixisey marxaladaha guud ee Sportiga dalka,gaar ahaan midka Haweenka oo ay xustey in dib u dhac weyn uu ku yimid mudadii bur burka ee dagaalada sokeeye.
“Marxalado aad u adag ayuu guddiga Olombikadu ku shaqeeynayey xiliyadii bur burka,gaar ahaan horumarinta iyo tartamadii Haweenka, waxaana xiligaan jira gabdho aad u badan oo ciyaara qeybaha kala duwan ee tartamada ay qabtaan xiriirada hoos taga SOC.”ayey tiri.
Waxaa ay halkaasi kulamo gaar gaar ah kula yeelatey qaar katirsan madaxdii iyo Hey’ado dhinaca Sportiga ah oo kulankaasi goob joog u ahaa,iyadoo kala hadashey sidii ay gacan uga geeysan lahaayeen Dib u dhiska Sportiga dalka ku yaala geeska Africa ee Soomaaliya,gaar ahaan dhinaca Haweenka.
“Waxaanu iminka u baahanahay inaad naga caawintaan sidii Dib ugu soo kaban lahaa Sportigeena guud, gaar ahaan dhinaca Haweenka,oo la xusuusto in Soomaaliya heer aad u sareeya ay ka joogtey xiligii dowladii dhexe”ayey raacisey.
Madaxdii iyo Heyadihii kala gedisnaa ee halkaasi ku sugnaa ayaa dhamaantood si weyn u dhuuxay warbixinta wakiilkii SOC, ay halkaasi ka jeedisey iyagoo si weyn u amaaney GOS oo marxalado adag ku shaqeeya,waxayna qaarkood balan qaadeen inay gacan ka geeysan doonaan dib u dhiska Sportiga dalka gaar ahaan dhinaca Horumarinta Haweenka.